अघि बढ्यो पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण अभियान - Arthatantra.com
अघि बढ्यो पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण अभियान
काठमाडौं । भूकम्पले क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण अभियान सुरु भएको छ । पुरातत्व विभागले यस वर्ष १ सय ४ वटा पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । हनुमानढोकास्थित नौतले दरबार र नुवाकोटको साततले दरबार चीन सरकारले पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि विभागले तयार गरेको कार्ययोजनामा छलफल गर्दै अभियान अगाडी बढाउने निर्णय भएको हो ।
यो वर्ष ७८ करोड रुपैयाँ पुराना सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणमा खर्च हुने विभागले जनाएको छ । यो वर्ष बसन्तपुर क्षेत्रको त्रैलोक्य मोहनको मन्दिर, इन्द्रायणी, कंकेश्वरी, नरदेवी र जैसी देवलको पुनर्निर्माण विभागले नै गर्ने भएको छ ।
यसैगरी पाटनको जगतनारायण मन्दिर, भक्तपुरको कला संग्राहालय, फर्सीदेग, बत्सला देवीको मन्दिर, तव सत्तल, स्वयम्भुको प्रतापुर र अन्नपुर मन्दिर लगायत पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणको लागि विभागले काम अघि बढाएको हो ।
विभागले पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण जिम्मा विभिन्न देश र संस्थाहरुलाई दिएको छ । चीन सरकारले हनुमानढोकास्थित नौतले दरबार र नुवाकोटको सात तले दरबारको पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग चीन सरकारले सम्झौता गरिसकेको छ । श्रीलंकन सरकारले बुङमतीस्थित रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर र आनन्दकुटी बिहार बनाउने भएको छ । त्यसका लागि श्रीलंकासँग पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
यसैगरी कन्जरभेसन हेरिटेज फाउण्डेसन नेपालले चाँगुनारायण मन्दिर परिसरका सत्तलहरु, काठमाडौं महानगरपालिकाले रानीपोखरी र काष्ठमण्डपका साथै माझुदेग बनाउने पक्का भइसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा उद्घाटन भई पुनर्निर्माण महाअभियानको शुभारम्भ गरिएको रानीपोखरीको पुनर्निमाणका लागि टेण्डर आह्वान समेत भइसकेको छ । विभागले काष्ठमण्डपको डिजाइनको स्वीकृति दिनासाथ टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउने महानगरपालिकाको तयारी छ ।
जापान सरकारले पनि दुईवटा मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको छ । तर, विभागले कुन मन्दिरको जिम्मा दिने भन्ने टुंगो लगाएको छैन ।
४ फागुन २०७२ / ३:०६
वि.सं.२०७२ फागुन ४ मंगलवार १५:१३ मा प्रकाशित
अघिल्लाे बजार नपाउँदा लाखौंको व्यवसाय धान्न गाह्रो
पछिल्लाे आज पनि सेयर बजारमा इन्भेष्टमेण्ट बैंककै हालीमुहाली, ६ करोडको व्यापार
फेरि आउँदैछ ६ लाख कित्तासम्म भर्न पाईने नयाँ आईपीओ !
वि.सं.२०७९ जेठ १३ शुक्रवार १३:४२
काठमाडौं । राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सनले आईपीओ निष्काशन गर्ने...
बाँडफाँड भयो दोर्दी खोला जलविद्युतको आईपीओ, कतिले पाए ?
वि.सं.२०७९ जेठ १३ शुक्रवार ११:३५
काठमाडौं । दोर्दी खोला जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ बाँडफाँड भएको छ...
बढ्यो सुनचाँदीको भाउ, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
वि.सं.२०७९ जेठ १३ शुक्रवार १०:४८
काठमाडौं । शुक्रबार सुनको मूल्य वृद्धि भएको छ । आज...
कति पाउँछन् त स्थानीय जनप्रतिनिधिले तलब सुविधा ?
वि.सं.२०७९ जेठ १३ शुक्रवार ०९:४६
काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेका छन्।...
कामना सेवा विकास बैंकद्वारा बाह्रौं शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालन
वि.सं.२०७९ जेठ १२ बिहीवार १८:२८
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले जेठ १२ गते...